नेपालमा खरीद गरिएका मोबाइल फोनको आइएमइआई दर्ता गर्नु नपर्ने
काठमाडौंः नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपालमा नै खरीद गरिएको मोबाइल फोनमा इन्टरनेशनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर(आइएमईआई) नम्बर दर्ता गर्नु नपर्ने जनाएको छ ।
विसं २०७४ वैशाख २८ गते प्राधिकरणले अवैध मोबाइल रोक्ने प्रणाली जडान गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको बोलपत्रमा आवेदन परेका १३ कम्पनीमध्येबाट २०७६ साल असारमा छनोट भएका कम्पनीले ६ महिनाभित्र उक्त सिष्टम जडान गर्नुपर्ने थियो । जसमा ओएसआई कन्सल्टिङ प्रा.लि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिङ्गापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट भएको थियो । सम्झौता भएको मितिले ६ महिनाभित्र एमडिएमएस प्रणाली जडान गरेर सञ्चालन ल्याइसक्नुपर्ने भन्दै रु ८० करोड बराबरको ठेक्का दिइएको थियो ।
विभिन्न कारणले रोकिएको एमडिएमएस प्रणाली साउन १ गतेदेखि जडान हुँदैछ । विसं २०७३ वैशाखबाट प्राधिकरणले इन्टरनेशनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आइएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न शुरु गरेको थियो । पहिलो चरणमा आइएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रोचरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) जडान गर्ने जनाएको थियो ।-रासस
३ दिन भारी वर्षाको सम्भावना
काठमाडौं, २३ असार । जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँले तीन दिन भारी वर्षा हुने भएकाले सतर्कता अपनाउन अपिल गरेको छ । प्रशासनले बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो । आज सूचना जारी गर्दै प्रशासनले नदी तथा खोला छेउछाउ नजान सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ ।
कुनै विपद्को घटना भएमा तत्काल जिल्ला आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रको फोन नम्बर ०६५५६११६१, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको फोन नम्बर ९८५६०६७७७७, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको फोन नम्बर ९८५६००११११ र प्रहरी उपरीक्षकको फोन नम्बर ९८५६०६५५५५ मा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ । रासस
युवा, रोजगार र रेमिट्यान्स
दलाल पुँजीवादी अर्थनीतिका कारण आज ठूलो संख्यामा युवाहरु रोजगारको खोजिमा विदेश पलायन भएका छन् । यद्यपि हाम्रो संविधानमा रोजगारी हरेक व्यक्तिको मौलिक अधिकारको रुपमा राखिएको छ । त्यतिमात्र होइन संविधानमा हाम्रो अर्थव्यवस्था समाजवाद उन्मुख हुने भनि घोषणा गरिएको छ । दलाल पूँजीवादको घनीभूत उपस्थिति मुलुकको संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि झन बढेर गयो । दलाल पूँजी भनेको राष्ट्रको पूँजी, कच्चा पदार्थ, जनशक्ति र राष्ट्रिय पूँजीको प्राकृतिक स्रोत साधनहरु साम्राज्यवादी एकाधिकार पूँजीपतिवर्गलाई बेचेर उनीहरुले दिएको जुठो पुरोमा बाँच्ने पूँजी हो । दलाल पूँजीवादले राष्ट्रिय उत्पादको अभिवृद्धि गर्दैन । यसको प्रकृति देशका युवा शक्तिलाई विदेश निर्यात गरी उनीहरुको रगत र पसिनाबाट साटेको रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकमले उतैबाट उत्पादन भएको सामान आयात गरी ठूलो रकम कमिसनबाट आर्जन गर्ने गरेको छ । यो अत्यन्त दुःखद अवस्था हो ।
मानव जीवनको सबैभन्दा उर्वरशील, गतिशील, जवानीले भरिपूर्ण अवस्था युवा हो । सामान्य रूपमा हेर्दा युवा भन्नाले जवानीले नछोडेको तर बुढ्याइँले नछोएको भन्ने बुझिन्छ । युवा इतिहासका सर्जक, युगका अग्रगामी तागत, क्रान्तिका वाहक तथा देशका रक्षक हुन् । राष्ट्रिय युवा नीति–२०७२ ले ‘युवा शक्तिलाई राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति’ मान्दै युवालाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको अग्रदूत तथा परिवर्तनका संवाहक शक्ति मानेको छ । राष्ट्रिय युवा नीतिले १६ देखि ४० वर्षको उमेर समूहलाई युवा मानेको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद ऐनलाई संशोधन गरी १८ देखि ३५ वर्षको उमेर समूहलाई युवा मान्ने प्रस्ताव गरिएकोछ ।
मुलुकको राजनीतिक तथा सरकारको गलत नीतिका कारण आज युवा वस्तु तथा सेवाझैं विदेश नियती भएका छन् । कैयौं विकसित राष्ट्र आफ्ना वस्तु तथा सेवाहरू विश्व बजारमा बिक्री गरेर समृद्ध तथा सम्पन्न भएका छन् । तर, हाम्रा युवाहरू विदेशी श्रम बजारमा पुगी रगत र पसिनासँग रेमिट्यान्स साटिरहेका छन् । कैयौं दिदीबहिनी आफ्नो अस्तित्वलाई रेमिट्यान्ससँग साटिरहेका छन् । यो मुलुकका लागि राम्रो कुरा होइन । किनभने यसले मुलुकलाई परिनिर्भरता बढाउने गर्छ । सरकारको युवा नीतिले जुन लक्ष्य र उद्देश्य राखेर युवालाई परिचालन गर्ने भनेको छ, त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिएको छैन । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले युवा नीतिको उद्देश्यअनुसार कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय युवा परिषद् र युवा स्वरोजगार कोष गठन ग–यो । तर, परिषद् र कोष दुवै झिनामसिना विषयमा अल्झिरहेका छन् ।
मानव जीवनको एउटा उमेर समूहको तप्का हो युवा । माओले युवातर्फ संकेत गर्दै भनेका थिए, ‘संसार तिनीहरूकै हो, किनभने तिमीहरू उदाउँदो सूर्य हौ भने हामी अस्ताउँदो ।’ माओको यो भनाइले पनि उनी युवाको भूमिकाप्रति कति आश्वस्त थिए भन्ने स्पष्ट हुन्छ । नेपालमा जनसंख्याको झन्डै ४० प्रतिशत युवाहरूले ओगटेको छ । विद्यार्थी, किसान, मजदुर, लेखक, बुद्धिजीवी, कलाकार, डाक्टर, वकिल, उद्योगपति, कर्मचारी, पत्रकार, समाजसेवी, राजनीतिक नेता कार्यकर्ता आदि क्षेत्रमा रहेको ठूलो हिस्सा युवाहरूको नै छ । देशको प्रायः सबै क्षेत्रमा युवाहरूको भूमिका जिम्मेवारीको स्तरले मुलुकको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्छ ।
अर्थतन्त्रको नाम लिनेबित्तिकै दिमागमा रेमिट्यान्स आइहाल्छ । हामीले रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको पहिचान बनाएको लामो समय भइसकेको छ । अझ मुलुक संघीय गणतन्त्रमा गइसकेपछि त उच्च शिखरमै पुगेको छ । मुलुकको आर्थिक गतिविधिका कारणले आज जनसंख्याको १५ प्रतिशत हिस्सा नेपाली युवा वैदेशिक रोजगारीको खोजिमा विदेश पलायन भएका छन् । यो मुलुकका लागि राम्रो कुरा होइन । गत आर्थिक वर्ष ०७५–०७६ मा बजेटमा सरकारले निकै महत्वाकांक्षी रूपमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, ५ वर्षभित्र कामको खोजीमा विदेश पलायन हुनु नपर्ने कुराको घोषणा गरेको थियो । तर त्यो प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखा पर्न सकेको छैन । हालको अवस्था हेर्ने हो भने श्रमबजारमा वार्षिक साढे ५ लाखको हाराहारीमा श्रमशक्ति थपिने गरेको छ ।
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले केही महिनाअघि सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार मुलुकमा बेरोजगारी दर ११.४ प्रतिशत रहेको आँकडा निकालेको छ । विभागको तथ्याङ्कअनुसार १५ वर्ष माथिका अर्थात् काम गर्ने उमेर समूहको जनसंख्या २ करोड ७ लाख ४४ हजार रहेकोमा त्यसमध्ये ७९ लाख ९४ हजार श्रम बजारमा सक्रिय छ । त्यसमध्ये ९ लाख ८ हजार जना पूर्ण बेरोजगार छन् । बेरोजगारमध्ये ५ लाख ११ हजार पुरुष र ३ लाख ९७ हजार महिला छन् । विभागले २०७४ असारदेखि २०७५ जेठसम्म लगाएर तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो । बेरोजगारमध्ये ६ लाख ४० हजार सहरमा र २ लाख ६८ हजार जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्छ । पुरुष र महिलाको बेरोजगार दर क्रमशः १०.३ प्रतिशत र १३.१ प्रतिशत छ । यस्तै सहरी बेरोजगार ११.६ र ग्रामीण बेरोजगार १०.९ प्रतिशत छ । ७० लाख ८६ हजार जनसंख्या भने कुनै न कुनै रूपमा रोजगारी छ । त्यसमध्ये ४४ लाख ४६ हजार पुरुष र २६ लाख ४० हजार महिला छन् । उक्त जनसंख्या काम गर्ने उमेर अर्थात् १५ वर्षमाथिको हो, जो जुन कुल जनसंख्याको ३४.२ प्रतिशत हो । यो उमेर समूहको जनसंख्यामध्ये सहरमा ४९ लाख १ हजार र ग्रामीण क्षेत्रमा २१ लाख ८५ हजार जना बसोबास गर्छन् । श्रमशक्तिमा सहभागिता दर सहरी क्षेत्रमा ४१.७ छ भने ग्रामीण इलाकामा ३२.९ छ । त्यसमध्ये पुरुषको प्रतिशत ५३.८ छ भने महिला जम्मा २६.३ प्रतिशत छन् । श्रमको अल्प उपयोग अर्थात् ४० घण्टाभन्दा कम काम गरेका र थप काम गर्न चाहने बेरोजगारको दर ३९.३ प्रतिशत छ ।
त्यस्तो दरमा पुरुषको ३२ प्रतिशत छ भने महिलाको ४८.८ प्रतिशत छ । मुख्य काममा अक्सर काम गर्ने समय सातामा ४४ घण्टा छ, जसमा पुरुषको ४८ घण्टा र महिलाको ३९ घण्टा रहँदै आएको छ । यस्तै, अर्थतन्त्रको ३७.८ प्रतिशत औपचारिक क्षेत्रमा र ६२.२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रमा रहे पनि औपचारिक क्षेत्रको रोजगारी भने १५.४ प्रतिशत मात्र छ र ८४.६ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रबाट छ । रोजगारमा रहेकाहरूको तलब–ज्याला प्राप्त गर्नेहरूको औसत मासिक आम्दानी रु. १७ हजार ८ सय ९ रहेको देखिन्छ । त्यसमध्ये पुरुषको औसत मासिक आम्दानीको तुलनामा महिलाको कम छ । पुरुषको मासिक आम्दानी रु. १९ हजार ४ सय ६४ रहँदा महिलाको त्यस्तो आम्दानी रु. १३ हजार ६ सय ३० रहेको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । नेपाली महिलाले पुरुषको तुलनामा औसत मासिक रु. ५ हजार ८ सय ३४ अर्थात् ३० प्रतिशत कम कमाउने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको झन्डै एकतिहाइ आधार रेमिट्यान्स देखिएको छ । यसलाई सधैं यही अवस्थामा राख्नु हुँदैन । किनकि यसले मुलुकलाई परनिर्भरता बढाउनेछ । वैदेशिक रोजगारी स्वदेशमा राष्ट्रिय उद्योग विकास नहुँदासम्म र रोजगारी नहुँदासम्मको अल्पकालीन विकल्प मात्र हो । हाल दैनिक झन्डै १ हजार ५ सय युवा हरेक दिन बिदेसिने गरेका छन् । कुल जनसंख्यामध्ये ठूलो हिस्सा युवाशक्ति बिदेसिनु राष्ट्रिय हिसाबले राम्रो होइन ।
अन्त्यमा सरकारले युवा जनशक्तिलाई विदेश पठाएर गर्व गर्नेभन्दा देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । युवाहरू स्वयंले आफ्नो मुक्तिका लागि गाउँदेखि सहरसम्म, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म सडकदेखि संसद्सम्म नेपाली श्रमबजारदेखि विश्व श्रम बजारसम्म लडिरेहका छन् । देश चलाउने मुख्य मेरुदण्ड युवाशक्तिलाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्नुको सट्टा रेमिट्यान्सबाट देश चलाउने घृणित नालायक नीतिले देश संसारकै सवैभन्दा कंगाल राष्ट्रको रुपमा दर्ज भएको छ । तसर्थ मुलुकलाई स्वाधीन र सम्पन्न बनाउने हो भने युवा निर्यात होइन नेपाली वस्तु तथा सेवा निर्यात गरी विश्व बजारमा पु–याउनु अपरिहार्य देखिन्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी छ ।
चीनले अनुदानमा दिएको खोप ४० वर्षमाथिको उमेर समूहलाई लगाउने निर्णय
काठमाडौं । सरकारले ४० वर्षमाथिको उमेर समूहलाई कोरोनाभाइरस विरुद्धको खोप दिने भएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमका अनुसार ४० देखि ५९ वर्ष उमेर समूहलाई खोप दिने निर्णय भएको छ ।
पूर्वाधारका हिसाबले उपयुक्त अस्पतालबाट खोप प्रदान गरिने डा गौतमले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यो उमेर समूहलाई चीन सरकारबाट प्राप्त खोप दिन लागिएको हो ।
चीन सरकारले नेपाललाई आठ लाख डोज खोप उपलब्ध गराएको छ । उक्त खोप सोमबार मात्र नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
'पृथ्वीनारायण शाहका जासुस थिए फेरि जोगी ?' सँग सम्बिन्धत प्रतिक्रिया
२०७७ पुस २५ गतेको एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा मेरो ‘पृथ्वीनारायणका जासुस थिए फेरी जोगी ?’ शीर्षकको लेख प्रकाशित थियो । यो लेख फेरी प्रचलनबारे समाजमा चलेका व्यावहारिक पक्षलाई आधार मानेर लेखिएको हो । त्यसमा दशनामी सम्प्रदाय जोडिन पुगेको कुरा मिथ्या हो भन्ने विज्ञप्ति र खण्डनहरु पढ्दा मलाई लाग्यो, भ्रमको जग समाजभित्र छ ।
हाम्रो समाजमा अधिकांश मानिसलाई नाथ सम्प्रदाय, बाह्रपन्थी, जोगी, सन्यासी र दशनामीको भिन्नतावारे थाह छैन । यहि भेद नबुझेका कारण गलत जनविश्वास समाजमा स्थापित छ ।
नाथ सम्प्रदायका मानिसलाई समाजले नचिनेका कारण आफ्नो परिचय दिँदा गिरी, पुरी, भारती अर्थात् दशनामी जस्तै हौँ भन्न बाध्य छन् । यसले अझै भ्रम सिर्जना भएको छ । नेपालको सरकारी सेवा र प्रहरीमा जागिरे बन्न अप्ठ्यारो परेपछि ओखलढुङ्गा सिद्धिचरण नगरपालिकाका युवाहरुले जोगी थर नलेखी गिरी लेख्ने गरेको वासुदेवनाथ बताउँछन् । (वासुदेवनाथको ‘के हो नाथ सम्प्रदाय?’ न्युज, कोसेली अनलाइन) । दशनामी भित्रकै पर्वत, आरण्य, सरस्वती आदिले आफ्नो वास्तविक थर नलेखी सजिलोका लागि गिरी लेख्ने गरेका शीतल गिरी बताउँछन् । अधिकांश मानिसहरुले नाथ र सन्यासीलाई एकै बुझ्ने रहेछन् । यसले समाजमा भ्रमको सिर्जना भएको पाइन्छ ।
यसमा कतिपय सामाजिक व्यवहारमा चलेका तर तथ्यहीन कुराहरुलाई लोकले सत्य मानिदिँदा किंवदन्ती नै बनेर जाने खतरा देखियो । समाजको व्यवहारिक पक्षको आधार र मूल्यांकन गरी प्रकाशित मेरो लेखप्रति सरोकारवाला जो जसले प्रतिक्रियागर्नु भयो, वहाँहरु सबैलाई धन्यवाद दिन्छु । उक्त लेखमा गिरी, पुरी आदि दशनामीले फेरी लगाउँछन् भन्ने भ्रामक कुरा प्रकाशित गर्नु मेरो कुनै उद्देश्य होइन र यो तथ्यगत पनि नभएको कुरा महशुस भयो ।
यसबाट मैले आफ्नो भ्रम निराकरण गर्ने अवसर पाएँ । मेरो कुनै पूर्वाग्रह र कसैप्रति आक्षेप गर्ने उद्देश्य नै होइन । तर, समाजभित्र लुकेको भ्रम निराकरण गर्नु विज्ञ, लेखक, सम्बन्धित सम्प्रदाय सबैको उत्तरदायित्व हुन्छ । लोक साहित्यको पहिलो पाठशाला समाज हो । नेपाली समाजमा प्रचलित विश्वास समातेर लेखेको मेरो लेखमार्फत् अन्यथा पर्न गएकोमा माफी चहान्छु ।
पत्रकार पुन परिवर्तन खबरको सम्पादक नियुक्त
काठमाडौं : २०५६ सालदेखि पत्रकारितामा क्रियाशील पत्रकार आनन्द पुन परिवर्तन खबरको सम्पादकमा नियुक्त भएका छन् ।
मध्यान्ह दैनिक, साप्ताहिक विमर्श हुँदै प्राय: दैनिक पत्रिकाहरुमा राजनीतिक बिटमा कलम चलाउँदै आएका पुनले यसअघि नेपाल टक र नेपाल न्यूज प्रेसमा २/२ वर्ष सम्पादकको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट नेपाली र राजनीति शास्त्रमा स्नात्तकोत्तर गरेका पुन एचडी नाइस टेलिभिजनमा साप्ताहिक ‘नेपाल टक’ का प्रस्तोता समेत हुन् ।
समाजसेवी विश्व कीर्तिमानी पत्रकार इम्तियाज
पत्रकारिता भनेको सर्वसाधारणको आवाज हो, दिल्लीका वरिष्ठ पत्रकार इम्तियाज अहमदबाट यो कुरा राम्रोसँग सिक्न सकिन्छ । किनकि उनी देशका यस्ता पत्रकार हुन्, जसलाई सामाजिक पत्रकारिताका लागि विश्व कीर्तिमानमा एकपटक मात्र होइन ३ पटक विश्व रेकर्डमा नाम दिइएको छ । स्तर पुरस्कारहरु पनि सजावटी गरिएको छ । यो थाहा हुन सक्छ कि हालसालै उनको नाम "होप इन्टरनेशनल वर्ल्ड रेकर्ड" मा रेकर्ड गरिएको छ। इम्तियाज अहमद जसले सामाजिक पत्रकारिताको जग बसाले र त्यस्तै प्रमाणित गरे । यसलाई निष्पक्ष राख्नको लागि, उहाँ करीव पन्ध्र वर्षदेखि विभिन्न बिभिन्न समाजमा सामाजिक पत्रकारिता गरिरहेका छन् । आफ्नो पत्रकारिताको माध्यमबाट यस पटक उनी समाजवादको क्षेत्रमा अनौंठो प्रयासका लागि 'होप इन्टरनेसनल वर्ल्ड रेकर्ड' मा मनोनित भए ।
श्री इम्तियाज अहमद, एक सामाजिक पत्रकार, चिन्तक, लेखक र एक भावुक व्यक्तित्व, देश भर मा सामाजिक पत्रकारिताको लागि आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान छ । उनको पत्रकारिता एक व्यवसाय भन्दा एक मिशन हो । उनले देशलाई एक नयाँ दिशा दिने लक्ष्य र विचारको साथसाथै उनी आफ्नो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि पूरा गर्दैछन, उनको पत्रकारिताले हिन्दी मापदण्डको उच्च आदर्श मूल्य मापदण्ड कायम गर्दै नयाँ मापदण्ड कायम गर्दै छ । देशको राजनीति बाहेक, श्री इम्तियाज अहमदले सामाजिक काम र उनीसँग सम्बन्धित प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग र आफ्नो पत्रकारिता मार्फत गरिब र दरिद्रहरूको लागि निस्वार्थ रहन सहयोग गरेर पत्रकारिता संसारमा नयाँ परम्पराको शुरुआत गरेका छन् । उनीहरू निरन्तर आफ्नो उल्लेखनीय स्वस्थ पत्रकारिताको माध्यमबाट समाज र राष्ट्रको प्रगति गर्दैछन् र राजनीतिक अवमूल्यन, भ्रष्टाचार र अनैतिकताबिरूद्ध बलियो राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य गर्दै छन् ।
मानव जातिका लागि सुन्दर भविष्य निर्माणको अलावा कमजोर तहका मानिसहरूलाई शिक्षित गर्ने उद्देश्यका साथ, सेवाका विभिन्न आयामी प्रस्तावनाहरू र कुकर्महरू र डिजाइनहरूकाबिरूद्ध आवाज उठाउँदै उनीहरू राजधानी दिल्लीमा अद्वितीय रचनात्मक र सामाजिक कार्यहरू गर्दैछन् । उनको एउटा लक्ष्य मूल्यको पत्रकारिता गर्नु हो भने दोस्रो ठूलो लक्ष्य साम्प्रदायिक सद्भाव र सौहार्द स्थापना गर्नु हो । नयाँ प्रतिभाशाली व्यक्ति, प्रतिभा र सामाजिक कार्यकर्ताहरुलाई बिभिन्न क्षेत्रहरुमा संसारमा ल्याउने र सम्मान गर्ने अनाैठा कार्य गरिरहेका छन् । उनी धेरै सेवा प्रोजेक्टहरूद्वारा कोरोनरी लकडाउनको क्रममा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै छन् । उनको सेवा परियोजनाहरू प्रशासनिक स्तरमा मात्र प्रशन्न छन् तर उनको अनौठो सेवा कार्यहरू मिडिया र आम जनतामा पनि सराहना गरिन्छ । उनले मुलुकमा एक उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् र सक्रिय सहभागिताको उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन । उनले जाति, वर्ण, वर्ग, भाषा, प्रदेश र धार्मिक संकुचनभन्दा माथि उठेर मानव धर्मलाई प्राथमिकता दिएका छन । वास्तवमा यसले इतिहास सिर्जना गर्ने काम गरेको छ ।
इम्तियाज अहमद, जसले देशको सांस्कृतिक विविधता देखाउँदछ र यस साझा संस्कृति, व्यक्तिगत चासो, विश्वास, मान्यता आदिको सुदृढीकरण गर्न धेरै छोटो समयमा धेरै अनौंठो कार्यहरू गर्दछ । सधैं भिन्न हुनेछ, तर तिनीहरू आपसी हुनेछन् । यो आपसी सहयोग, सद्भाव र सापेक्षता कायम राख्नु आवश्यक छ र यो इम्तियाज अहमदको बहुभाषी व्यक्तित्वको पृष्ठभूमि पनि हो । उनीहरूको सोच राष्ट्रव्यापी छ, उदारवादी र राष्ट्रवादी सोचले उसले ठूलो लक्ष्य हासिल गरेको छ र आफ्नो समुदायको सोच बदल्न पनि बाध्य छ। गरेको छ । सायद यही कारण हो कि आज भारत बाहेक उनको नाम विश्वका धेरै देशहरूमा प्रख्यात छ ।
नमुना युवा संसदको प्रधानमन्त्रीमा बस्नेत निर्वाचित
दोलखा : दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाले आयोजना गरेको नमुना युवा संसदको प्रधानमन्त्रीमा दोलखाका सामाजिक कार्यमा क्रियाशील युवा राजन बस्नेत निर्वाचित भएका छन् । युवा पुस्तालाई व्यवस्थापिका संसदको प्रक्रिया र नीतिगत व्यवस्थाबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले भीमेश्वर नगरपालिकाका युवाहरूलाई संलग्न गराएर नमुना युवा संसद सञ्चालन गरिएको हो ।
नमुना युवा संसदको सभामुख पदमा भी.न.पा ९ का युवा भीमबहादुर खत्री, गृहमन्त्रीमा भी.न.पा ४ का दिनेश चौलागाईं, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रीमा भी.न.पा १ का विकल्प थामी, स्वास्थ्य मन्त्रीमा भी.न.पा ४ कि सबिना चौलागाईं, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतामा भी.न.पा ७ का महेश भुजेल, प्रमुख सचेतकमा भी.न.पा ९ कि रन्जिता भुजेल लगायत निर्वाचित भएको भीमेश्वर नगरपालिका शिक्षा शाखाका अधिकृत अर्जुन कार्कीले जानकारी दिए ।
सरकार, सांसद र प्रतिपक्षीको अभ्यास गरिएको संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि विपक्षी दलका सांसदहरुले प्रश्न उठाएका थिए भने सत्तापक्षका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले जवाफ दिएका थिए । सदनमा सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी मन्त्रीपरिषद् गठन गरिएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ को कार्यविधिअनुसार नमुना संसदको कारवाही अघि बढेको हो ।
उनीहरूले युवा संसद र सरकारको अभ्यास गर्दै कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्न सरकारले गरेको गतिविधि, कोरोनाका कारण रोकिएको शैक्षिक गतिविधिलाई अघि बढाउन सरकारको नीति, नेपालको भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक फिर्ता गर्न सरकारको रणनीति लगायतका विषयमा छलफल गरेको थियो ।
राष्ट्रिय युवा परिषद्ले स्थानीय तहमा युवाको सशक्तिकरण तथा सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक मूल प्रवाहिकरणमा सहभागिता खोज्न यस प्रकारको नमुना कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो । भविष्यमा नेतृत्व तहमा सक्षम जनशक्ति पु¥याउने लक्ष्यका साथ सञ्चालित कार्यक्रममा १६ देखि २४ वर्षका युवा सहभागी छन् ।
युवा प्रधानमन्त्री बस्नेतले युवाहरुको हक, अधिकार र संरक्षणमा सक्रिय भएर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सुखी नेपाली समृद्धि नेपाल निर्माण गर्नका लागि युवाहरु एक जुट भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको जिकिर गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख भरत केसीले नमुना युवा संसदको अभ्यासबाट युवाको क्षमतामा वृद्धि विकास हुनुका साथै युवाहरुमा रहेको अन्तरनीहित प्रतिभा प्रस्फुटन गर्न सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा भीमेश्वर नगरपालिकाको उपमेयर कमला बस्नेत वडा अध्यक्षहरु लगायतको उपस्तिथि रहेको थियो । कार्यक्रम कोरोना संक्रमणकाबीच भौतिक दुरी कायम गरी सम्पन्न भएको थियो ।
राजपुरमा कालेपत्रे सडकको शिलान्यास
रौतहट : रौतहट जिल्लाको झेत्र नं दुई राजपुर नगरपालिकास्थित डमार चोकदेखि बैरिया टोलसम्म सडक कालोपत्रे हुने भएको छ । करिब चार सय मिटर लम्बाईको उक्त निर्माणाधीन सडकको शिलान्यास भएको छ । राजपुर नगर प्रमुख मो.सकिल अखतर, प्रशासकीय अधिकृत बैजु ठाकुर, वडा अध्यक्ष शेख अनसारुल शेख मोजरेआलमलगायतले सामुहिक रुपमा उक्त निर्माणाधीन सडकको शिलान्यास गरेका हुन् ।
शिलान्यास कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख अखतरले सडक निर्माणमा कुनै भ्रष्टाचार हुन नदिने र समयमै काम सक्न लगाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उक्त कालोपत्रे सडक बन्ने भएपछि स्थानीय जनताहरुमा खुसीको छाएको छ । शिलान्यास कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय बुद्धिजीवी, पत्रकार एवं सर्वसाधारणहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।